Umhla My Pet » Indlela Ukonwabela Umhla First
ngokuthi Catherine Monreal
ukubuyekezwa: Mar. 27 2020 | 2 min ukufunda
amaxesha amaninzi kakhulu izibini ezintsha overthink umhla lwabo lokuqala. Badlala imeko ezahlukeneyo iintloko zabo malunga yintoni ezinokuba kwenzeka kwaye basebenzele ngentswahla phambi okunene ekuzukisekeni kunye. Ingcinga ephambili sizazi kakuhle ezinye umntu ethatha isihlalo emva kukhathazeka malunga nokuba ngaba benza nesimilo esihle – baya ochukumisa ubuso babo kakhulu, kakhulu ukuthetha, Andithethi ngokwaneleyo, kwaye naphezu.
Umhla wokuqala kufuneka ibe lixesha sizazi kakuhle ezinye umntu nokumamela nokusabela oko bakuthethayo. njani ukuphulaphula omnye umntu xa niyiwelayo oko uza kuthetha ntoni na okanye hayi ngoxa yena okanye yena uthetha? Ukuba ucinga ukuba, kanye ukuba uchitha ixesha lakho ingqalelo wena alibale ukuba kujoliswe kufuneka abe omnye umntu. Uchitha imini yonke kunye ngokwakho; Zinike ikhefu aze achithe ixesha kunye nomnye umntu.
Ngoko ke, kufuneka uphume intloko yakho uze ujonge ixesha langoku. Yintoni ke esithi ukuba uyakwazi oko ku-? Uqhuba Yintoni ukuba ungathanda ukwazi okungakumbi? Enye ingcamango elungileyo ukuba ukukhumbula ukuba lo mhla yakhe yokuqala kakhulu, yaye mhlawumbi kanye njengoko novalo njengoko. Ngaba ayilibale ukuvula ucango kuwe? Okanye ndingabagungxuli kwesitulo phandle? Ngaba kubonakala nje ukuba ukuthetha ngaye hayi ngokubuza imibuzo? Xa ubona ezi zihlandlo ngokwembono ukuba omnye umntu nervous kakhulu, kulula ukuba siye sibone apho eseleyo ebusuku esenokubangela.
Ukuba luvo malunga wayenuka, ukugcina ezinye zobisi ebhegini yakho okanye ipokotho. Kuya kuba kuhle ukuba ezinye Kleenex okanye itshefu nani kwakunye. Akuyomfuneko ukuba umhlise yiKhabhinethi amayeza yonke, kodwa ukuba izinto ezimbalwa nawe okanye kufutshane kuwe kuya kukunceda ukuba ube ngaphezulu bakhululeke.
Ingongoma ephambili kubo bonke oku ukuba bachithe ixesha kunye nomhla wakho ukuba wonwabe yaye bonwabile inkampani yakhe. Ubomi ntoni kwaye ngamanye amaxesha izinto azihambi njengoko bekucwangcisiwe. Ukuba nengqondo evulekileyo (kwaye intliziyo) uyakwazi umqulu nantoni kwenzeka. Lo isenokuba umhla wokuqala ezininzi. Khululeka nwabele!